n'anya Archives — njem Lee - Official Site
n'anya n'anya n'anya n'anya n'anya n'anya n'anya n'anya n'anya n'anya n'anya n'anya n'anya n'anya
M ụtọ ekwurịta uche Chineke maka ndụ anyị, ọbụna mgbe-ekwetaghị ihe m banyere ya. Mkparịta ụka nwere ike inwe ezigbo n'ụdị na-egosi n'ezie ngwa ngwa ezie na-karịsịa mgbe anyị na-ekwu okwu banyere controversial mbipụta. Na ọ bụ mgbe fun na-agwa mmadụ na-eche na ha na-ezighị ezi. N'ihi ya, m na-agbalị kpachara anya na ihe m kwuru, na nanị na-ezo aka ihe Chineke kwuru, kama m echiche nke onwe. dị ka clockwork, ezie na, na ụfọdụ ebe n'oge mkparịta ụka, ha ga dọpụtaara trump kaadị: "Ma ọ dịghị ihe Bible na-ekwu bụghị ikpe? Ị conveniently ọsọsọp n'elu amaokwu, good?"Ọ dịghị ada ada.
na Matiu 7 Jesus na-ekwu,, "Unu na-ekpe ikpe, ma ọ bụ gị onwe gị kwa ga-ekpe ikpe. "Ọbụna na ndị na mgbe na-agụ Bible nwere ike ihota akụkụ a nke ozizi si dee ya. Nke a nwere ike ịbụ ihe kasị ọma mara amaokwu Baịbụl n'oge anyị. O nwekwara ike ịbụ ndị kasị ghọtahiere
Nghọtahie amaokwu a pụtara na anyị ghọtahie otú anyị na-kwesŽrŽ hụrụ ibe ha n'anya. Ya mere, ọ dị mkpa na anyị na-ajụ ajụjụ: Gịnị ka Jizọs bu n'obi mgbe ọ gwara anyị ka anyị na-ekpe ikpe?
Ihe O apụtaghị
ikpeazụ ná ngwụcha izu, mụ na nwunye m gara a alụmdi na nwunye omumuihe na anyị na chọọchị. Dị ka anyị na-eje ije site na ọ bụla…
Na ọzọ ọ na-ekwu, "N'ihi na Chineke…